1. Qabsashada naaska ilmaha
Miyuu ilmuhu afka aad u kala qaadayaa ama mise afka inyar oo keliya ayuu ku hayaa hareeraha ibta naaska?
Sababaha keena inuu ilmuhu naaska inyar qabsado
Ilmaha ayaa naaska ka fog
Garka ilmuhu kuma dhejisna xabadka/laabta
Isagoon ilmuhu naaska leef-leefin- oo aanu samaynin dhaqdhaqaaq uu naaskii ku raadiyo ayuu afka geliyey.
Tallaabooyinka lagu saxayo
Maqaarka oo maqaarka loo saaraa waxay kicisaa dabeecad naas-nuujinta.
Haddii ay hooyadu dib isu qalloociso ilmaha ayaa si sax ah u soo dhawaanaa (adeegsiga sharciga culayska).
Ha leefo oo ka raadiyo ilmuhu ilaa carrabka laga arko bushimada kadibna la arko inuu ilmuhu si fiican afka u kala qaaday.
Miyuu ilmuhu dhakhsanayaa, dhig ilmaha meel waxyar ka saraysa xabadka/laabta laakiin waa inuu garka ku hayaa xabadka/laabta markaa ilmuhu wuu raadsankaraa ibta naaska.
Marka qofka oo fadhiya uu naaska ilmaha nuujinayo waxay ku fiican tahay ibta naaska ayaa lagu aadinayaa bishamada ama dibnaha sare/sanka.
In ilmaha garabka dambe laga soo taageero waxay fududaynaysaa inuu ilmaha garkiisu aad ugu soo dhowaado.
2. Dareenka naas-nuujinta
Miyaad dareentaa naas-nuujinta bilowaga hore xanuun, kaas oo ku siideynaya muddo yar kadib, mise naas-nujinta oo dhan waxaad dareentaa xanuun?
Sababta caadiga ah ee ugu badan xanuunka naas-nuujinta joogtada
Ilmaha ayaa waxyar afka geliyey/qabsaday naaska sidaa daraadeed ibtii naaska ayaa ciriiri noqotay
Hadduu uu xanuunku sii socda, eeg qodobka 1aad.
Waa muhiim inuu garka ilmuhu uu aad ugu dhowyahay xababdka/laabta
Ilmuhu naaska markale dib ha u qabsado oo ha leef-leefo naaska oo ha raadiyo ilaa uu si fiican afka u kala qaado
Isku day in aad hababkale naaska u siinayso
Qaado daawada xanuun jebisada haddii aad u baahato
3. Awooda nuugista ilmaha
Miyuu ilmuhu si awood leh u nuugyagaa mise waxaad dareemaysaa inuu marba waxyar nuugayo oo uu "jaqqayo"?
Sababaha caadiga ah ee keena awood aan ku filayn
Ilmaha ayaan naaska si fiican afka u wadagelin
Garka ilmuhu kuma dhejisna xabadka/laabta hooyada¨
Waxaan bilaaban caanihii naasaha hooyada ka soo bixilahaa
Xanuunka naas-nuujinta ayaa kalifaya inay caanuhu soo baxaan
Ilmaha ayaa laga yaabaa inuu dheregsan yahay
Ilmaha ayaa waxkale oo dheeraada lasiiyey
Eeg qodobka 1aad.
Haddii uu xannuun jiro eeg qodobka 2aad.
Haddii ilmaha wax dheeraad ah lasiinayo, fadlan waydii shaqaalaha inta cuntada laga yarayn karo.
4. Habka nuugista aan joogto ahayn
Miyey muuqaalka naas-nuujintu tahay mid gaagaaban oo nasasho leh taas oo ilmuhu nuugayo waxbadan si qoto dheer u sii socota dhowr daqiiqo, ama ilmuhu wuxuu u nuugayaa si xammaysan isagoon nasanayn? Miyuu ilmuhu qabsadaa naaska kadibna wuu siidaynayaa dhowr jeer, miyuu qaylinayaa mise markiiba wuu seexanayaa?
Sababta caadiga ah ee keenikarta habka nuugista aan joogtada ahayn
Caanihii naasaha ka soo bixi lahaa ayaan bilaaban (ficil-celintii naasaha). Waxay qaadankartaa wakhtiyo kala duwan inta aanay caanaha naasaha ka soo bixin.
Raadi hab kaga haboon sida aad ilmaha naaska u siinayo
Tababaro dabacsan/ka fikir wax markaad xusuusato uu jirkaagu dabacyo
Weydiiso lamaanahaaga inuu garbaha kuu masaajeeyo/cagaha
Qaado waxaad cabto/cunto
Qaado daawada xanuunka jebisa haddii aad u baahato
5. Qaabka ibta naaska naas-nuujinta kadib
Miyey ibta naasaha saamayn ku yeelatay mise waxyar ayey bannaanka u soo baxeen/isku ururay?
Sababta caadiga ah ee keenta markay ilbta naasuhu dib isugu noqdaan
Ilmaha ayaa waxyar naaska afka geliyey. Taasi waxay keenaysaa xanuun iyo raaxo la'aan marka aad ilmaha naaska nuujinayso waxaanay kodhinaysaa khatar inay ibta naasuhu nabar yeeshaan. Caanihii soo bixilahaana saaman ayey ku samaynayaa.